Shir looga Hadlayay Horumarinta Caafimaadka Puntland oo la soo –Gaba-gabeeyay – Radio Daljir
Seteembar 15, 2015 5:39 b 0
Talaado, September 15, 2015 (Daljir) —Xarunta Wasaarada Caafimaadka Puntland ee magaalada Garowe ayaa lagu soo gaba-gabeeyay maanta shir laba maalmood ka socday oo dib loogu eegayay shaqada caafimaadka ayna ka soo qaybgaleen dhamaan hay’adaha la shaqeeya wasaarada iyo khuburo caalami ah uu hogaaminayo Prof. Khaliif Bille.
Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr. Cabdinaasir Cismaan Ciise (Cuuke) ayaa soo xiray kulankan lagu soo bandhigay guulihii laga gaaray caafimaadka, caqabadaha jira iyo qorshaha soo socda ee horumarinta caafimaadka Puntland.
Agaasimaha Guud ee wasaarada Caafimaadka Dr. Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa sheegay inay ka soo qaybgaleen ilaa 70 qof oo ka shaqeeya Caafimaadka Somalia, uuna horu-dhac u yahay shir 17-ka bishan ka furmaya Nairobi kaasi oo deeq-bixiyaasha ugu gudbin doonaan shaqada la qabtay, baahiyaha jira iyo qorshaha shanta sanno ee soo socota.
Baahinta adeega caafimaad laga bilaabo heer degmo ilaa tuulo ayaa ka mid ahaa guulihii wasaaradu soo bandhigtay.
Kormeer ayaa Wasiirka caafimaadka, Agaasimaha Guud iyo khuburadu ku tageen Xarunta Caafimaadka Gargaar iyo Cisbitalka guud ee magaalada Garowe oo ay warbixino ka dhageysteen masuuliyiinta, islamarkaasina is-dul taageen qaabka shaqadu u socoto.
Sidoo kale galinkii danbe ee maanta ayaa masuuliyiinta wasaarada uu horkacayo wasiirku iyo Prof. Khaliif Bile socdaal ku tageen Tuulada Birta-Dheer oo 45Km u jirta Garowe.
Ujeedka socdaalkan ayaa ahaa mid loogu kuurgalayo sida ay u shaqeyso Marwada Caafimaad ee Tuulada oo Prof. Khaliif ka wareystay Shaqada caafimaad ee tuulada u hayso.
Prof. Bille oo horey u ahaa madaxa WHO ee Pakistan ayaa hindisay barnaamijka Marwo Caafimaad oo ah in gabar rasmi ku ah deegaan la siiyo tababar la xariira caafimaadka, maareynta hooyada uurka leh, la socoshada talaalka caruurta, talo siinta iyo wacyigelinta. Waxana ka dib markii lagu guuleystay Pakistan laga hirgeliyay dalka.
Kulamo Madaxweyne Gaas uga Bilowday Magaalada Gaalkacyo